माओका अनौठो लाग्ने ८ जिवनशैली -
माओका अनौठो लाग्ने ८ जिवनशैली
E Naya Khabar Reporter २०७४ माघ ५ गते शुक्रवार	| जीवनशैली
चीनमा सफल जनवादी क्रान्ति गरी आर्थिक उन्नतिको ढोका खोलिदिने राजनेता हुन माओत्सेतुङ ।
त्यसैले त माओलाई आधुनिक चीनका क्रान्तिनायकका रूपमा विश्वले चिन्छ । माओकै नेतृत्वमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि चीन शान्ति र विकासको गतिमा लम्किएको हो । आधुनिक चीनका ती कमान्डर माओको जीवनशैली खासमा कस्तो थियो ? यस्ता छन् केही रोचक पक्ष स्
सुत्ने खाटभरि किताब
जंग च्याङले माओको जीवनी लेखेकी छिन् । ‘माओ स् द अन्नोन स्टोरी’मा उनले माओको स्मरणशक्ति निकै राम्रो भएको लेखेकी छिन् । पढाइ र लेखाइमा उनी निकै सौखिन थिए । उनी सुत्ने कोठाको खाटको आधा भागमा करिब एक फिटको उचाइसम्म किताब हुन्थे, प्रायः चिनियाँ सहित्यका । च्याङका अनुसार उनी आफ्नो भाषण र लेखमा तिनै किताबबाट लिइएका उदाहरण प्रयोग गर्थे ।
रातभर काम गर्ने
माओ महत्वपूर्ण काम रातको समयमा गर्थे । उनी दिनमा भन्दा रातमा बढी सक्रिय हुन्थे । लगभग पूरै रात काममै व्यस्त हुन्थे र बिहान भएपछि मात्रै सुत्थे । चीनस्थित भारतीय तत्कालीन जुनियर अफिसर नटवर सिंहले विभिन्न अन्तर्वार्तामा माओको यस्तो बानीबारे खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार सन् १९५६मा चीन गएको भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डलसँग माओले मध्यराति १२ बजे मात्रै भेटेका थिए । राति १० बजे भेट्न पुगेको टोलीलाई उनले १२ बजेपछि मात्रै भेट्ने सन्देश दिएका थिए । उनी भेट्न जाने जो–कोहीलाई आफ्नै खुसीमा मात्रै भेट्थे ।
माओ चुरोटका अम्मली थिए । नटवरका अनुसार संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको सो भेटमा माओले एकपछि अर्को चुरोट सल्काइरहेका थिए । जब त्यहाँ उपस्थित भारतीय राजदूत आरके नेहरूले आफ्नो मुखमा चुरोट राखे तब माओले नै चुरोट सल्काइदिएका थिए ।
माओ पढ्नेदेखि योजना बनाउने काम आफ्नै ओछ्यानमा बसेर गर्थे । अझ रोचक पाटो के भने उनी उनी खानासमेत ओछ्यानमै बसेर खान्थे । उनका लागि आफ्नो खाट कतिसम्म प्यारो थियो भने जहाँ जाँदा पनि सँगै लिएरै जान्थे । ट्रेन यात्रामा पनि उनका लागि त्यही खाट र्पुयाइएको हुन्थ्यो । आफ्नोबाहेक अरू खाटमा नसुत्ने उनको अनौठो बानी थियो । सन् १९५७ मा मस्को जाँदा पनि उनको खाट जहाजमै राखेर त्यहाँ र्पुयाइएको थियो ।
दाँत ब्रस नगर्ने
माओका डाक्टरसमेत रहेका जी सी लीले ‘द प्राइभेट लाइफ अफ चेयरम्यान माओ’ किताबमा माओका व्यक्तिगत जीवनबारे धेरै लेखेका छन् । माओले कहिल्यै पनि दाँत नमाझेको, बरु दाँत सफा गर्न बिहानै उठेर चियाले कुल्ला गर्ने गरेको लेखेका छन् । एक समय त उनको दाँतमा हरियो रंग लगाएजस्तो देखिन्थ्यो रे ।
नुहाउँदा रिस उठ्ने
लीका अनुसार माओलाई नुहाउनुपर्दा रिस उठ्थ्यो । उनी आफूलाई सफा र स्फूर्त राख्न हरेक दिन तातो तौलियाले स्पन्ज गर्थे । माओकी नर्स फ्यु मिङले दारी मिलाइदिने तथा कपाल काटिदिने गर्थिन् ।
गाउन लगाएर बस्ने
माओ प्रायः कहिल्यै पनि जुत्ता लगाउँदैनथे, खाली खुट्टा हिँड्थे । लगाउनै परे कपडाको जुत्ता मात्र लगाउँथे । तर, औपचारिक कार्यक्रममा छालाकै जुत्ता लगाउनुपर्ने भएकाले पहिला उक्त जुत्ता खुकुलो बनाउन सुरक्षा गार्डलाई लगाउन दिन्थे । उनी प्रायः फाटेर सिलाएको लुगा लगाउने गर्थे भने मोजा जहिल्यै प्वाल परेकै लगाएको देखिन्थ्यो ।
माओ घरमा रहँदा नुहाउँदा प्रयोग गर्ने गाउन मात्रै लगाउँथे । यो कुरा पनि लीको पुस्तकमै लेखिएको छ । १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनसँग आफ्नै निवासमा भएको भेटको प्रसंगलाई पनि डा. लीले पुस्तकमा उतारेका छन् । त्यो भेटमा माओले सुट लगाएका थिए । ६५ मिनेटको भेटवार्ता सकिएर निक्सन कोठाबाट बाहिरिनेबित्तिकै माओले उक्त सुट फुकालेर पुरानो बाथ रोब लगाएका थिए । (नयाँ पत्रिकाबाट
194 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - रौताका जनप्रतिनिधिलाई तालिम
अघिल्लाे - सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि त्रियुगा नगरपालिका मौन
यी हुन् स्वस्थ रहने २७ विधि
स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु हरेक मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो। प्रकृतिले स्वस्थ भएर...
सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री बढ्यो कर बढेन
गाईघाट, बैशाख १६ सुर्तीजन्य प्रदार्थको बिक्री बढे पनि कर नबढेको विज्ञहरुले बताएका...
उदयपुरमा क्यानसरको औषधी हुने लोठ सल्ला लोप हुँदै
बैशाख १२ उदयपुरः संरक्षणको अभावमा उदयपुरमा पाइने लोठ सल्ला लोप हुँदै गएको...
धन्यवाद मारुती सिमेन्ट, ‘निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिदियौ
’कटारी, बैशाख ७ ‘सधैँ हातखुट्टा दुखिरहन थ्यो, सवैले घरमा जति उपचार गर्दा...
बेवारिसे बन्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्था
उदयपुर, माघ २४ नियमन गर्ने निकाय जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय उत्तरदायित्व विहीन बन्दै...
उदयपुर पूर्ण खोप सुनिश्चिता जिल्ला घोषणा
गाईघाट, माघ १६ ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिवद्धता’...